Maxaad nadiifinta taariikhda browser si joogto ah muhiim u tahay?
Qof walba waa ogyahay in ay muhiim tahay in ay nadiifiso taariikhda browser si joogto ah, laakiin waxaa wax yar uun ciddii wax garan sababta ay lagama maarmaan tahay. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah dhibcood sharxaya sababta waa in aad sii nadiifinta taariikhda dhirta ka iPhone:
Saar duugowday Records - Mar kasta oo aad soo booqato bogga ah, macluumaadka waxaa lagu kaydiyaa foomka of cookies. In kasta oo macluumaad ah sida uu yahay is-iyo waxaa si toos ah tirtiray sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo gaadho wakhti ay dhicista, mararka qaar macluumaadka jira iyo haddii goobta booqday ayaa la joogta ah loo cusboonaysiiyo, ay rikoor duugowday inaad amarradiisa xajinaysaan iyo ka helitaanka goobta. Cookies ee la baneeyo oo ay la socdaan taariikhda dhirta ciidamada iPhone in ay raadiso bogga codsaday sida haddii ay tahay markii ugu horeysay waxaa la baadhay, oo sidaas daraaddeed macluumaad cusub oo ugu dambeeyay ee goobta waxaa ku kaydsan qalab aad.
Yeelo Privacy - Marar badan, marka aad wareejinta aad iPhone kuwa kale, waxaa laga yaabaa inaadan dooneynaa inay ogaadaan oo website-yo aad soo booqatay. Tan iyo goobta kasta oo aad soo booqato waxa lagu kaydiyaa qaybta History aad iPhone, nadiifinta taariikhda dhirta ee dadka kale ka ilaalinaysaa baafinta bogagga hore furay on your iPhone.
Hagaajinta Waxqabadka - Iyadoo diiwaanka badan oo lagu kaydiyaa taariikhda dhirta ah, aad iPhone noqdo daalid iyo aad u dhawra oo isticmaalaya qalab aad flawlessly. La baneeyo taariikhda dhirta kor u siidaysay qadar badan oo ah meel disk aad telefoon, oo sidaas ay qaab aad u korodho.
Sida loo kala cadeeyo taariikhda browser iPhone ee gacanta
Si aad wax fudud oo dadka isticmaala ku, macruufka kuu ogolaanaya in aad kala cadeeyo taariikhda browser ka iPhone gacanta. Marxaladani waxay uma baahna app bilaash ah ama lacag leh dhinac saddexaad in lagu xiro ee aad taleefan oo aad ka heli karto hawsha sameeyo iyadoo la isticmaalayo laftiisa fursadaha u dhisay-in.
Si aad u taariikhda browser iPhone ee gacanta, waxaad raaci karaan tilmaamaha tallaabo-tallaabo hoos ku qoran:
Fiiro Gaar ah: Waxa loo maleeyey in aad isticmaasho oo kaliya Safari si ay u helaan internetka. Xaaladdan oo kale, waxaa jira web browser kale lagu rakibay on your iPhone iyo aad u isticmaasho internetka fankooda, waa in aad isticmaasho habka saxda ah si aad u nadiifiso taariikhda.
Laga soo bilaabo screen Home ku, ay helaan iyo Settings ka jaftaa.
Laga soo bilaabo Settings uu furmo suuqa, ka jaftaa Safari .
Marka Safari suuqa kala kor u furmay, hel oo ka jaftaa Clear History iyo Website Data .
Laga soo box gujisid soo baxa ka, ka jaftaa Clear History iyo Data in ay nadiifiso taariikhda browser ka iPhone.
Sidee si joogto ah u tirtirto taariikhda browser ka iPhone ah
Inkastoo habka kor ku xusan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala cadeeyo taariikhda dhirta aad iPhone ee aan ku tiirsan wax app dhinac saddexaad, habka uu yahay mid dheer oo aanu masixi xogta joogta ah. Xogta tirtirayaa la isticmaalayo habka kor ku xusan la raadsan karaa iyadoo la isticmaalayo qalab kasta oo xoog leh soo kabashada xogta. Taas ayaa ka dhigaysa aad iPhone iyo xogta ay u nugul, gaar ahaan marka aad telefoon loo isticmaalo baahida shirkadaha iyo badan ee sirta ah ilaalinta macluumaadka xasaasiga ah.
Si aad u saarto Xogta xasaasiga ah iyo kuwa gaarka ah ka iPhone si joogto ah iyo si fudud, waa in aad isticmaasho barnaamij baabbi'iyuhu xogta xoog badan, iyo SafeEraser by Wondershare noqon lahaa bet ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Wondershare SafeEraser ma aha oo kaliya Daahiriyo taariikhda browser aad iPhone iyo tirtirtaa xogta si joogto ah, waxa kale oo kuu ogolaanaya inaad si ay u qabtaan hawlo kale ayna iPhone badan oo suurtogal maaha haddii kale.
Waxaad raaci kartaa fariimaha tallaabo-tallaabo hoos ku qoran si joogto ah Tirtir ka iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser:
Isticmaal links kor ku soo bixi Wondershare SafeEraser sida ay your computer.
Ka dib markii ay soo degsado, isticmaal hab ay si joogta ah si loo soo dajiyo barnaamijka.
Marka lagu rakibay, abuurtaan Wodnershare SafeEraser by double-gujinaya ay icon.
Sug ilaa SafeEraser Wondershare rakibtay darawallada loo baahan yahay sida aad iPhone. (Diyaar in aad bixiso ogolaashahaaga ee sanduuqa wax xaqiijin (es) oo ku taala loogu rakibo.) Marka baxdo, xiriiriyaan iPhone in computer isticmaalaya cable xogta u yimid ay la socdaan waxaa la.
Marka shaashadda ugu weyn, riix badhanka masixi Private Data (wakiil icon ah ee SIM a).
On suuqa kala socda, sug ilaa iyo inta baaritaano SafeEraser Wondershare iyo ogaadaa macluumaadka gaarka loo leeyahay in la tirtiri karaa ka iPhone.
Marka sameeyo, ka fiiri Safari History checkbox ka Murayaad bidix.
Optionally, waxa kale oo aad ka hubin kartaa Safari Cache iyo Safari Kukiyada checkboxes si ay u kala cadeeyo sidoo waxqabadka fiican.
Guji ka masixi Hadda button marka loo sameeyo, iyo marka ay keentay in, aad bixiso ogolaashahaaga in ay sii wadaan geedi socodka taariikhda browser nadiifinta.
Clear History Browser on iPhone Video Tutorial
Kale Wondershare sifooyinka muhiimka ah SafeEraser
Sida kor ku xusan, Wondershare SafeEraser uu leeyahay qalab kale oo badan oo la dhisay-in ay tayadoodii aad iPhone ayaa qaab ciyaareed. A yar oo iyaga ka mid ah waxaa si kooban hoos ku wada hadleen,
Masixi All Data - Habkaani caawinaya dhammaan xogta ku cad ka iPhone oo waa inaad u samaysaa sida mid cusub. Waxaad isticmaali kartaa habkaani markii aad rabtid in aad iibiso iPhone ama waxa uu noqonayaa mid daalid.
Masixi tirtiray Files - Habkaani si joogto ah waxay dumisaa dhamaan faylasha hore u tirtiray. Marka files tirtiray waa la tirtirayaa isticmaalaya masixi tirtiray Files, ay u noqdaan kuwo unrecoverable xitaa marka ah qalab xoog leh soo kabashada xogta loo isticmaalo.
Space Saver - Tani qalab dhisay-in kuu ogolaanayaa inaad cadaadin sanamyada badbaadiyey in aad iPhone oo bilaash ah xaddi badan oo ah meel ay kaydinta.
1-Guji Nadiifinta - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nadiifiso dhammaan faylasha junk, files ku meel gaar ah, iyo barnaamijyadooda ku isticmaalin ka iPhone. By sidaas samaynaya, waxqabadka iPhone la kordhin karo.
La baneeyo taariikhda browser aad iPhone waa muhiim, sidaas darteed waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo qalab wax ku ool ah si aad u hesho hawsha sameeyo. Wondershare SafeEraser waxaa si hufan loogu tala galay iyo in la horumariyo si fiican u adeegaan ujeedada.
> Resource > masixi > Sida loo joogto ah oo cad Browser History ka iPhone ah